08 / 01 / 2019 09 / 01 / 2019 Dimitri 4545 Views စာ0မှတ်ချက် 2019, 42096 Porsche 911 RSR, Lego, Lego Technic, နည်းပညာ
အကြီးဆုံးလိမ့်မယ် Lego နည်းပညာ ယခုအချိန်အထိ 2019 ၏အစုံ, 42096 Porsche 911 RSRအရွယ်အစားကတကယ်ကိုအရေးပါတယ်ဆိုတာသက်သေပြနိုင်မလား။
စျေးနှုန်း: £ 139.99 / $ 149.99 / € 149.99 အပိုင်းပိုင်း: 1,580 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
2016 ရဲ့ခြေရာကိုနင်း 42056 ခုနှစ် Porsche 911 GT3 RS, 42096 Porsche 911 RSR နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာ Porsche 911 ပရိတ်သတ်များအတွက်ရရှိနိုင် ၎င်းသည်ယခင်မော်ဒယ်ထက်သေးငယ်ပြီးအပိုင်းအစပေါင်း ၁၅၈၀ သာ ၂,၇၀၄ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဖြူ၊ အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်တို့၏ ပို၍ မှန်ကန်သောပြိုင်ကားအရောင်အဆင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ကစားခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ဆလင်ဒါအင်ဂျင်ခြောက်လုံး၊ ယာဉ်ရပ်နားမှု၊ စတီယာရင်နှင့်ကားအတွင်းခန်းအတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ယာဉ်မောင်းသူ၏တံခါးအတွင်းရှိလဂူနာပြိုင်ကားတိုက်မြေပုံပါရှိသည်။
st ရှိခြင်းartတစ် ဦး အဖြစ်ဤပြန်လည်သုံးသပ်စီးရီး ed Lego နည်းပညာ အပျိုစင်, ငါဒီလှိုင်းထဲမှာအစုံကိုးစုံ၏ရှစ်မှတဆင့်ငါ့လမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုချီးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဒီနှစ်ပြသထားသည့်ပစ္စည်းအစုံအလင်ကိုကိုင်တွယ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုခံစားမိသည် နည်းပညာ အစုံ - ဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးသည်အထိအကောင်းဆုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီလော
အဆိုပါ box ကိုကြီးမားသည်, ဒီတော်တော်ရှုပ်ထွေးပြီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်သွားသည်အကြံပြုသည်။ သေတ္တာ art Supercar သည် circuit ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်သော Laguna ကိုပြသသည်။ ပြောင်းပြန်တွင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိသည် နည်းပညာ Porsche ကတကယ့်ဘဝကောင်တာပါart အမြန်နှုန်း၊ မြင်းစွမ်းအင်နှင့်အင်ဂျင်အရွယ်အစားစသည့်အချက်အလက်များနှင့်အတူ။
သေတ္တာထဲတွင်အိတ် ၁၃ လုံးပါရှိသည်။ အားလုံးမရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလှသောညွှန်ကြားချက်လက်စွဲ၊ စတစ်ကာနှစ်လုံးနှင့်တာယာလေးခုပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့သွားပြီး၎င်းသည်မော်ဒယ်၏ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားကိုဖော်ပြရန်ကူညီသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အနေဖြင့်စာဖတ်သူများအားသတိရသင့်သည် Lego Group သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတာယာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးကိုနည်းလမ်းခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ၊ တည်ဆောက်မည့်အပိုင်းများကိုခွဲထုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည် 42096 Porsche 911 RSR အချိန်ယူပြီးဒီဟာနေရာတော်တော်များများလိုအပ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ထိုင်ခုံတစ်ကွက်တည်းတွင်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်တည်ဆောက်မှုအားလုံးကိုစွန့်ခွာရန်သတ်မှတ်ထားသောနေရာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသို့မဟုတ်အလွယ်တကူဟန့်တားနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ချေ Lego ပန်ကာ။
အများဆုံးနှင့်အမျှ Lego နည်းပညာ တည်ဆောက်မှုသည်ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ စတီယာရင်ယန္တရားများနှင့်ဆလင်ဒါအင်ဂျင်ခြောက်ခုနှင့်စတင်သည်။ အချို့သောကောင်းတဲ့နည်းစနစ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် partဤအပိုင်းကိုပျော်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်စေပါ။ ငါစartငါစီစဉ်ထားတဲ့လာမည့်မိုက်ခရိုအဆောက်အအုံများတွင်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့နိုင်သောကြောင့်မီးခိုးရောင်မီးခိုးရောင်စတီယာရင်အဆစ်လေးခုနှင့်တူသည်။
အဆောက်အ ဦး ၏အစောပိုင်းအဆင့်စဉ်အတွင်း 42096 Porsche 911 RSR တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတဲ့ပုဒ်မများစုပေါင်းပြီးအတူတကွသွားလာနိုင်တဲ့အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ဘောင်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ဒီလှိုင်းထဲကအခြားရှစ်စုံတွဲများထက်အများကြီးပိုကြီးသည်။ အဆိုပါပုံတူခြောက်ဆလင်ဒါအင်ဂျင်နှင့်စတီယာရင်စက်ပြင်၏တပ်ဆင်ရှုပ်ထွေးသောညာဘက်အဆင့်မှာဆောက်နေကြသည်။ ငယ်ရွယ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ပျော်စရာကောင်းနေစဉ်တွင်၎င်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးမော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်နီယာလောက၏ကောင်းမွန်သောနိဒါန်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။
ငါပြောတာကစတီယာရင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါလည်းစတီယာရင်ကိုကြည့်ရတာကြိုက်ပေမဲ့သေးငယ်တဲ့စတီယာရင်စက်ပြင်ချင်တယ် ၂၀၉၃ Chevrolet Corvette ZR42093 (ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်) ။ အလားတူပင်, partထိုင်ခုံများဆောက်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်မှာအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်သေးငယ်သောအပိုင်းတွင်ထိုင်ခုံ၏ဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်သည်။
ကြီးမားသောဘောင်ပြီးစီးသွားသည်နှင့်၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆိုင်သောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်artတောက်ပဖို့။ အချို့ပါးနပ်စွာထောင့်ရှိဆက်သွယ်မှုများသည်စူပါကာ၏ကြမ်းတမ်းသော curves များကိုဖန်တီးရန်ကူညီသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အလုပ်ကိုအသေးစိတ်ထည့်ရန်စတစ်ကာများပါသည့်ဘီးမုတ်များနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဘီးမုတ်များအမှန်တကယ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်၊ တစ်လျှောက်လုံးတွင်ကပ်ထားသည့်စတစ်ကာများရှိသော်လည်းယင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောပုံစံတွင်စစ်မှန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များထပ်မံထည့်သွင်းရန်ကူညီသည်။
တံခါးများ 42096 Porsche 911 RSR sm တွေရှိတယ်artly ဒီဇိုင်းကိုရှေ့တောင်ပံကဲ့သို့ပြုလုပ်ထားသည်။ နှစ်ခုလုံးသည်အတူတကွထားရန်အလွန်ကျေနပ်အားရကြသည်။ ရှေ့ပတ်ပတ်လည်စကိတ်သည်မော်ဒယ်လ်ပုံသဏ္giveာန်ကိုအမှန်တကယ်ကူညီရာရောက်သည် startတစ် ဦး Porsche ၏မှတ်မိပုံစံအပေါ်ယူ s ။
ဒိုင်ခွက်နှင့်အတွင်းပိုင်းသည် p အချို့ကိုအသုံးပြုသည်arts ကိုနှင့်လိမ္မာပါးနပ်ထောင့်ကိုအသုံးပြု။ နှင့်တစ် ဦး ရောနှောဖန်တီးနေကြသည် နည်းပညာ ပုံမှန်စနစ်အုတ်။ ရှေ့မျက်နှာပြင်၊ ခေါင်မိုးနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်သည်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ နောက်ဘက်နေရာများတွင်တပ်ရန်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်တိကျစွာနှင့်တိတ်ဆိတ်သည့်စတစ်ကာများလိုအပ်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုလက်ျာဘက်စည်းဝေးပွဲတစ်ခုချင်းစီကိုအောက်ပါဏရှိနေသော်လည်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပျော်မွေ့သည်occasion ရံဖန်ရံခါထက် ပို၍ သည်းခံခြင်းနှင့်အလွန်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သောတကယ့်တကယ့်တကယ့်ကိုခိုင်မာသည့်ဆက်သွယ်မှုများရှိသည်။ ကနေ ပြီးပြီမော်ဒယ် symmetry အများကြီးရှိပါတယ်, ဒီဇိုင်းသမားတစ် ဦး ချင်းစီခြေလှမ်းတစ်ခုစီစီစဉ်ထားပုံကိုကြောင့်ထပ်ခါတလဲလဲခံစားရတယ်ဘာမျှမ။ ဤသည်လျင်မြန်စွာတည်ဆောက်ခြင်းသည်မဟုတ်, အမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိ အဲဒါပြီးပြီတခါအောင်မြင်မှု၏။
42096 Porsche 911 RSR ၎င်း၏ကစား features တွေရောင်းချတဲ့အစုတခုမဟုတ်ပါဘူး။ တံခါးအားလုံးဖွင့်ခြင်း၊ ရှေ့စတီယာရင်၊ ဆိုင်းထိန်းစနစ်နှင့်ဆလင်ဒါခြောက်လုံးပါ ၀ င်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤအရောင်းပြခန်းသည်အဓိကအရောင်းရဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ စင်ပေါ်မှာအခန်းတစ်ခန်းလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပြင်ထားပါ။ အချောပုံစံသည်မီတာဝက်နီးပါးခန့်တွင်အလွန်ကြီးမားသည်။ ၎င်းသည်ရှုထောင့်တိုင်းမှလုံးဝမယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်၊
အရောင်အဆင်းနှင့်ကပ်ပြီးစတစ်ကာများနှင့်အတူ Porsche ပြိုင်ကားဆန်ဆန်ပြိုင်ကားကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးဒီဇိုင်နာများသည် Porsche 911 ၏မှားယွင်းသောပုံကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။artရှေ့ကရှေ့မီးရဲ့အသွင်အပြင်ကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်အလှဆင်ခြင်းအတွက်အများအားဖြင့်သုံးလေ့ရှိတဲ့ LED မီးငယ်လေးဟာပူဖောင်းရဲ့အမိုးအောက်မှာအံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်သွားပြီးမော်ဒယ်ကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျစေတယ်ဆိုတာငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။
ဒါဟာအနည်းငယ်ထူးဆန်းသည် Lego မကြာမီတွင်နောက်ထပ် 911 set ကို Group မှဖြန့်ချိမည် 42056 ခုနှစ် Porsche 911 GT3 RSအထူးပြုပြင်မွမ်းမံထားသောအရောင်အသွေး၊ ရှေ့မီး၊ windscreen နှင့်အတွင်းပိုင်းများကြောင့်အချို့သောတိုးတက်မှုများကြောင့်အထူးသိသာထင်ရှားသည့်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ဤသည်ကိုကျိန်းသေပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အစုတခုမဟုတ်ပါဘူး နည်းပညာ လက်သမားနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းစနစ်များကြောင့်ဆောက်လုပ်သူများကဤအရွယ်အစားသည်အလွယ်တကူစိတ်ပျက်အားလျော့နိုင်သည်။ မင်းက နည်းပညာ ပန်ကာနှင့်မျှမျှတတရှုပ်ထွေးသောတည်ဆောက်ပျော်မွေ့ခြင်း၊ ၎င်းသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောနောက်ဆုံးမော်ဒယ်ကို ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်၊ ထို့နောက်၎င်းသည်အလွန်အကြံပေးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။
ကိုးလုံးကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည် နည်းပညာ 2019 ပစ်လွှတ်လှိုင်းမှအစုံ, 42096 Porsche 911 RSR ဒီဟာကဒီလှိုင်းလုံးရဲ့အကြိုက်ဆုံးလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာတကယ့်ကိုလှပပြီးကြည့်ကောင်းတဲ့အရာပါ၊ စတိုင်နဲ့စိမ်းနေပြီ၊ တည်ဆောက်မှုကမယုံနိုင်လောက်အောင်နက်ရှိုင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာအပြင်ပျော်စရာနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ငါ့အတွက်အမြဲတမ်းရှေ့တန်းမှာ Lego.
42096 Porsche 911 RSR ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် shop.lego.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Discover သည် LEGO Movie 2: The Second P ကိုထုတ်လွှင့်သည်art “ မပျော်ဘူး” ကာတွန်းကြော်ငြာ
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ: ရပ်တန့်ပါ၊ အမ်မမ် →